Yiba Ukuthengiswa kwamaza-iShenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-Fumax isebenzisa umatshini we-Wave Soldering ukuthengisa izixhobo zomngxuma.Inomgangatho ongcono kune-soldering ngesandla.Iyakhawuleza nayo.
I-Wave soldering isenza i-solder wave yobume obukhethekileyo kunye ne-solder yolwelo olutyhidiweyo kumphezulu wolwelo webhafu ye-solder ngoncedo lwe-mercury.Emva koko ubeka i-PCB enamalungu afakiweyo kwisitulo sokuhambisa, kwaye udlule kwi-solder wave kwi-engile ekhethekileyo kunye nobunzulu bokuqonda i-solder joints.
1. Kutheni ukhetha i-wave soldering?
Njengoko amacandelo abe mancinci kunye ne-PCB denser, ukubakho kweebhulorho kunye neesekethe ezimfutshane phakathi kwamalungu e-solder kuye kwanda.I-Wave soldering isombulula le ngxaki ubukhulu becala.Ngaphandle koku, inezinye iingenelo:
(1) I-Solder ekwimo equkuqelayo inceda umphezulu we-PCB othengiswe nge-solder ngakumbi kwaye izisa umsebenzi ongcono wokuhanjiswa kwe-thermal.
(2) Ukunciphisa ixesha lokuqhagamshelana phakathi kwe-solder kunye ne-PCB kakhulu.
(3) Inkqubo yothutho yokuthutha i-PCB kulula ukuyenza ngentshukumo yomgca kuphela.
(4) Uqhagamshelwano lwebhodi kunye ne-solder kwiqondo lokushisa eliphezulu ngokukhawuleza, elinokunciphisa i-warping yebhodi.
(5) Umphezulu wesoda etyhidiweyo une-anti-oxidant yokuhlukanisa umoya.Ngethuba nje i-solder wave ibonakaliswe emoyeni, ixesha le-oxidation liyancitshiswa, kwaye inkunkuma ye-solder ebangelwa yi-oxide slag iyancitshiswa.
(6) Umgangatho ophezulu we-solder joints kunye ne-avareji yokubunjwa kwe-solder.
Ukusebenzisa i-wave soldering xa iiplagi zifuneka kwibhodi yesekethe
3. Ukulungiselela imveliso
I-Solder paste recovery
I-Solder Cola Ukushukumisa
4. Umthamo wethu: Iiseti ezi-3
5. Uthelekiso phakathi kwe-wave soldering & reflow soldering:
(1) I-reflow soldering isetyenziswa ikakhulu kumalungu etshiphu;I-Wave soldering yenzelwe i-soldering plug-ins.
(2) I-Reflow soldering sele ine-solder phambi kweziko, kwaye yintlama ye-solder kuphela enyibilikiswayo eziko ukuze yenze i-solder joint;I-wave soldering yenziwa ngaphandle kwe-solder phambi kwesithando somlilo, kwaye ithengiswa kwiziko.
(3) Ukuthengiswa kwakhona kwe-solder: ubushushu obuphezulu bomoya bubumba i-reflow soldering kumalungu;I-Wave soldering: I-solder etyhidiweyo ifom ye-solder edibeneyo kwizinto.
IPcb enamacala amabini Odm PCba IRigidFlex Pcb IPcb Fabrication kunye neNdibano IFlex PC Ibhodi yeSekethe eprintiweyo